Bija - Хорватский - Бирманский Переводы и примеры
Вы искали: bija (Хорватский - Бирманский)
svijet ih ne bijae dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, peæinama i pukotinama zemaljskim.
ဤလောကသည် ထိုသူတို့နှင့် မထိုက်မတန်။ သူတို့သည် တောကြိုတောင်ကြား၊ ဥမင်မြေတွင်းထဲမှာ အပြောင်းပြောင်း အလည်လည်နေရကြ၏။
ali ne nadvlada. I ne bijae im vie mjesta na nebu.
jer jo bijae u boku oèevu kad mu u susret iziðe Melkisedek.
Ali to mi god bijae dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom.
A broj èeta konjanièkih, kako sam èuo, bijae dvije mirijade mirijada.
I prizor bijae tako straan da Mojsije reèe: "Strah me je i dræem!" -
ထိုသို့ ထင်ရှားကြသောအရာသည် အလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်၍၊ မောရှေက၊ ငါသည် ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်ခြင်းရှိသည်ဟုဆို၏။
အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်ကြည့်ပြီးမှ၊ အခြားသို့သွား၍ မိမိအဆင်းသဏ္ဌာန်ကို ချက်ခြင်း မေ့လျော့တတ်၏။
Taj to sjede bijae nalik na jaspis i sard. A uokolo prijestolja duga slièna smaragdu.
ထိုသူ၏ အဆင်းအရောင်သည် နဂါးသွဲ့ကျောက်၊ ပတ္တမြားကျောက်နှင့်တူ၏။ ပလ္လင်၏ ပတ်ဝန်း ကျင်၌ကား၊ မြကျောက် အဆင်းအရောင်နှင့်တူသော သက်တံ့ရှိ၏။
ထိုအခါ ယုဒလူတို့၏ပသခါပွဲခံချိန် ရောက်လုနီးသတည်း။
Uveèer bijae Isus za stolom s dvanaestoricom.
ညဦးယံအချိန်ရောက်မှ တပည့်တော်တကျိပ်နှစ်ပါးတို့နှင့်အတူ စားပွဲ၌ လျောင်းတော်မူ၏။
Sedmero braæe bijae. Prvi uze enu i umrije ne ostavivi poroda.
ညီအစ်ကိုခုနှစ်ယောက်ရှိပါ၏။ အစ်ကိုအကြီးသည် မိန်းမနှင့်စုံဘက်၍ သားမရှိဘဲသေလျှင်၊
ယေရှုသည် တဆယ်နှစ်နှစ်ရှိသောအခါ ပသခါ ပွဲထုံးစံအတိုင်း ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြ၍၊
jo ne shvatie ono o kruhovima, nego im srce bijae stvrdnuto.
ယောဟန်၏ ဗတ္တိဇံတရားသည် ဘုရားကဖြစ်သလော။ လူကဖြစ်သလောဟု မေးတော်မူ၏။
ဗေသနိရွာသည် ယေရုရှလင်မြို့နှင့် တတိုင်လောက်သာကွာဝေးသည်ဖြစ်၍၊
U poèetku bijae Rijeè i Rijeè bijae u Boga i Rijeè bijae Bog.
Bijae veæ oko este ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete,
ထိုအချိန်သည် မွန်းတည့်အချိန်လောက်ဖြစ်၍ သုံးချက်တီးအချိန်တိုင်အောင် မြေတပြင်လုံး၌ မှောင် မိုက်အတိ ဖြစ်လေ၏။
Bijae tako sedmero braæe. Prvi se oeni i umrije bez djece.
ညီအစ်ကိုခုနစ်ယောက်ရှိပါ၏။ အစ်ကိုအကြီးသည် မိန်းမနှင့်စုံဘက်၍ သားမရှိဘဲသေလျှင်၊
Baci se nièice k Isusovim nogama zahvaljujuæi mu. A to bijae neki Samarijanac.
nonude models (Датский>Немецкий)παρατηρησεισ (Греческий>Английский)quod ego dico (Латинский>Английский)amo (Тагальский>Английский)rem publicam (Латинский>Французский)ctrld(Английский>Датский)他们的行为 (Малайский>Китайский (упрощенный))dove (Английский>Маори)hindi mo ko masisisi (Тагальский>Английский)lumbar lordosis is lost (Английский>Хинди)la vida sigue (Испанский>Английский)autovetture (Испанский>Итальянский)trabalhemos (Португальский>Английский)jangan perasan (Малайский>Английский)tilberedninger (Датский>Мальтийский)lupo mannaro (Итальянский>Французский)alcobre (Испанский>Датский)kepekaan (Малайский>Китайский (упрощенный))salomonem (Латинский>Себуанский)kanya patala (Английский>Сингальский)vij band padli tar in marathi (Английский>Хинди)bf hindi me full hd (Английский>Хинди)ablo español (Испанский>Английский)germaan (Голландский>Английский)i am krishna holic (Английский>Хинди)